Ego ole ka ngwanrọ dị na blog a - Geofumadas
Julaị, 2009 ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google Earth / Maps, GvSIG, IntelliCAD, manifold GIS, Microstation-Bentley, virtual Earth
M na-ede banyere isiokwu teknụzụ nzuzu ruo ihe karịrị afọ abụọ, na-abụkarị ngwanrọ na ngwa ya. Taa, achọrọ m iji ohere mee nyocha nke ihe ọ pụtara ikwu maka ngwanrọ, na-enwe olileanya ịme echiche, na-egosipụta omume ọma na otu ha si emeghachi omume na akụ na ụba na okwu na -emepụta okporo ụzọ na atntanetị ọbụlagodi gbasara mgbasa ozi site na AdSense .
software Tiketi ndị gụnyere ya Nleta ndị na-agụnye gị Onu o mepụtara
Enyochala m Google Analytics, dabere na ọnwa 5 gara aga, site na ịjụ maka nsonye site na isiokwu na itinye aha ụlọ ọrụ na ngwanrọ kachasị. Mkpokọta nleta sitere na isiokwu ndị ahụ bụ 113,953 na n'ime ngụkọta nke $ 320.02 bịara site na isiokwu.
Echere m ihe ndenye ma ọ bụ ederede ederede dabere na edemede nke akụkụ ahụ, ma e wezụga Mapinfo, nke m ga-enweta na ọchụchọ site na LiveWritter n'ihi na ọ ga-esite na ya abụghị otu.
Nleta ndị a
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na 61,420 pụtara 54% nke nleta niile sitere na engines ọchụchọ site na iji isiokwu. Nke nwere ike ịpụta na ihe karịrị 50% nke ndị ọbịa m na-abịa Google sitere na mmemme 11 a.
Mgbe ị na-atụle ngụkọta ego nke na-abịa maka mmemme 11 ndị a, na mkpokọta niile na-abịa site na isiokwu, a kwubiri na 47% si ebe ahụ bịa.
N'ihe banyere nhazi, anyị nwere ike kewaa nleta n'etiti ọnụ ọgụgụ nke ederede ederede, nke a ga-enye anyị ikike nke nzaghachi na mmemme nwere ịzụ ahịa na nke a bụ tebụl.
AutoCAD azaghachila karịa ihe m kwuru maka ya, n'ihi ewu ewu ya wee hụ na ekele nke ahụ, IntelliCAD zara nke abụọ. Mgbe ahụ ArcGIS na-esote Google Earth iji mechie anọ mbụ.
Ọ bụ ihe ijuanya etu gvSIG dị na Hispanic dị mma karịa Microstation. Lelee Manifold GIS ọdụ na CadCorp, nke pụtara na ọ bụghị ezigbo ego ikwu maka sọftụwia ekwuputaghị na mgbasa ozi gbasara ịnweta ego mgbasa ozi mana ọ bụ mmeri iji nweta scoop ahụ.
Kedu ụzọ ọ bụla, ide banyere ngwanrọ bụ otu n'ime echiche izizi na blọọgụ a. Chọta okporo ụzọ dị mma, ịchọta ụzọ Google AdSense bara uru mana ịmụ ihe ọhụụ kwa ụbọchị ... na-enye afọ ojuju.
Previous Post«Previous 28 Finalists for Natural Wonderful
Next Post Na-edeba ezigbo ụwaNext »
5 Na-aza "Ego ole ka sọftụwia ahụ bara na blọọgụ a"
Arịrịọ ochie, ana m atụ anya otu ụbọchị iji mee ya obi ụtọ.
M ga-agwa gị na m na-agụ blog gị ugboro ole. Ee, ana m anakwere na ọtụtụ n'ime ihe ndị m na-agụ metụtara Autocad na Google Earth, ọ bụ ezie na achọtara m isiokwu ndị na-adọrọ mmasị na ọdịnaya nke mmemme ndị pụrụ iche, nke, maka ọtụtụ ihe kpatara ya, enweghị m nnwere onwe ibudata ma ọ bụ ịkwado ndị enyi m.
Mbido gị dịka nke a yiri ka ọ bụ m ọkachamara mara mma (na ihe mere na ọ bụghị, nke onwe onye) nke na-enye ihe nchịkọta dị mma nke usoro ihe eji eme ihe na ọ bụghị otú ahụ. N'ezie, ị na-ewepụta oge iji chọpụta ihe gbasara ha, echere m ma ọ bụ na ha zigara gị ozi ahụ ebe ọ bụ na ị na-etinye aka na ya. Nke m chere na ọ dị mma, ebe ọ bụ na ebumnuche bụ ịkekọrịta echiche gị gbasara ngwaahịa na teknụzụ ka ndị ọzọ weghara na saịtị anyị ma ghara ichegharị na peeji dị iche iche, ihe na mgbe ụfọdụ anyị enweghị oge iji mee.
Na nke a ma na-agbalị ịghọta ihe ikpeazụ nke blog ahụ, anyị ga-aghọta ihe ntinye mgbasa ozi gị pụtara na ndụ gị (nke m chere na ọ bụghị ihe ka ukwuu) ma ọ bụ otú o si dị mkpa maka gị. Enwere m echiche na eziokwu nke mmụta-nkuzi bụ ihe kachasị mma na ikpe gị ma dị mma, nke adịghị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ.
Ekwesịrị m ikwupụta na ọ siri ike ịbanye m na "mgbasa ozi" ahụ, belụsọ na ha dị mkpa iji mara mmemme ma ọ bụ ngwaahịa. Nke na - eduga m na arịrịọ na - esote: (Amaara m na agbanyeghị m n'ime peeji ahụ, mana…) Co nwere ike ime nyocha na ngwaahịa kacha mma, nke a na-ejikarị eme ihe na nke kachasị ọhụrụ banyere GPS? Ọ ga-amasị m ịmata echiche gị banyere ya na nyocha iji mata ihe bụ ọdịiche ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa na ọrụ ha n'ozuzu. Ana m ekwe nkwa ịhụ njikọ ị na-akwado… hahahaha !!! :))